people Nepal » मध्यरातमा किन भेटे ओलीले चिनियाँँ राजदुत र प्रधानन्यायाधीश ? मध्यरातमा किन भेटे ओलीले चिनियाँँ राजदुत र प्रधानन्यायाधीश ? – people Nepal
मध्यरातमा किन भेटे ओलीले चिनियाँँ राजदुत र प्रधानन्यायाधीश ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदुत होउ यान्सी भेटवार्ता भएको छ । चिनियाँ राजदूत होउ सोमबार राति प्रधानमन्त्रीलाई भेटन बालुवाटार पुगेकी थिइन् । नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लाग्ने गरेका बेला प्रधानमन्त्रीको पद नै धरापमा परेको यो बेलाको भेटघाट अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ ।
नेपालमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको दवाव आइरहेका बेला चिनियाँँ राजदूतसँगको भेटमा नेपाली राजनीतिको बारेमा कुरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सत्तारुढ नेकपा भित्रनै असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई घेरिरहेका बेला उनले राजदूत यान्छीसँग भेट गरेका हुँन् ।
गत डिसेम्बरको अन्तिममा चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाईरसले नेपालमा संक्रमणको जरा फैलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका महत्वकान्क्षी राजनीतिक गतिविधिले उनको सत्ता अहिले अफ्ठेरोमा परेको छ ।
चीनसँग तत्काल दुई पक्षिय जरुरी छलफलका विषय सतहमा नआएका बेला भएको यो भेटघाटलाई चीनको राजनीतिक चलखेलका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आजै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरालाई पनि भेटेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बालुवाटारमै बोलाएर भेट गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री आफू अफ्टेरोमा परेका बेला निकासका लागि संवैधानिक र कानूनी प्रवाधानहरु हेर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन थालेको देखिन्छ ।
दिउसो कोटेस्वरमा माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली पक्षको भेटवार्ता भएको थियो । सरकारका कामकारवाही प्रति असन्तुष्ट पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष दुई मध्ये एक पद छोडन समेत माग गर्दै आएको छ ।
ओलीको स्वास्थ्य बारे चिनियाँ राष्ट्रपतिको चासो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच सोमबार टेलिफोनमार्फत कुराकानी भएको छ । कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।
सीले नेपालले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरको कामको खुलेर प्रशंसा समेत गरेका छन् । चीनबाट सुरु भएको कोरोनालाई चीनले नियन्त्रणमा लिएको र विश्व समूदायलाई चीनले कोरोनाका विरुद्ध लड्न सघाएकोमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खुलेरै प्रशंसा गरिन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईमा अन्तराष्ट्रिय समूदायबीच एकजुटता र सहयोगको आवश्यक्ता रहेको बारे दुवै राष्ट्रपतिकाबीच कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।